ပဲခူးမြို့၊ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ် - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / ပဲခူးမြို့၊ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
July 8, 2020	တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ, ပဲခူးမြို့နယ်, သတင်းမှတ်တမ်းများ 59 Views
ဇူလိုင် ၈ (ပဲခူး)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ဇူလိုင်လ(၈)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့၊ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
ရှေးဦးစွာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက မြို့ပြတစ်ခု သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးအတွက် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် အလွန်ရေးပါကြောင်း၊ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို MJT Co., Ltd မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကိုလည်း သိရှိရပြီး ပြည်သူများမှလည်း ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိသည်ကိုလည်း ကြားသိနေရကြောင်း၊ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က ရှိခဲ့သည့် ပဲခူးမြို့တွင်းမှ အမှိုက်ပုံများ အထိုက်အလျောက် လျော့နည်းသွားပြီး ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းနှင့် ရေရှည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာ ပဲခူးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့မှ MJT Co., Ltd နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာစောညိုဝင်းက MJT Co., Ltd နှင့် အမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နှစ်ရှည်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုင်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များကိုလည်းကောင်း၊ တက်ရောက်လာသည့် ပဲခူးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ ကုမ္ပဏီမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်တစ်ခုခြင်းအလိုက်ကိုလည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ် ဦးအုန်းမြင့်က စာချုပ်(မူကြမ်း)နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပြုပေးခြင်းများကိုလည်းကောင်း၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ယခင်အမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့အပေါ် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြန်လည်အမှိုက်ခွန်ရရှိခဲ့မှု အခြေအနေများကိုလည်းကောင်း အသီးသီး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းနောက် MJT Co., Ltd . Managing Director ဦးရဲထွန်းအောင်က ပဲခူးမြို့အတွင်း ယခင်အမှိုက်သိမ်းဆည်းမှု၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုနှင့် ယခုမိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အချိန်ကာလအတွင်း အမှိုက်သိမ်းဆည်းမှု၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု အခြေအနေတို့အား Power Point ဖြင့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက လိုအပ်သည်များ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာစောညိုဝင်း၊ ဥပဒေချုပ် ဦ:အုန်းမြင့်၊ အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ ခူးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ MJT Co., Ltd . Managing Director ဦးရဲထွန်းအောင်နှင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။